Taageerada ururka midowga yurub loo hayo oo aad kor ugu kacdey - Radio Sweden Somali - Raadiyaha Iswiidhen | Sveriges Radio
Foto : NEIL HALL
Taageerada ururka midowga yurub loo hayo oo aad kor ugu kacdey
Ururka EU oo taageerada loo hayaa ay aad kor ugu kacdey.
La daabacay onsdag 18 oktober 2017 kl 10.28
Tirakoob cusub oo laga qaadey dadweynaha reer yurub ee dalalkoodu xubnaha ka yihiin ururka midowga Yurub ayaa muujiyey in dadkaas badankiisu ay taageersan yihiin , wax wanaagsanna u arkaan in dalalkoodu qeyb ka noqdaan ururka midowga Yurub.
Tirakoobkaan cusub ee dadweynaha reer yurub laga soo uruuriyay ayaa waxaa in la qaado dalbadey baarlamaanka midowga Yurub, waxaana weydiimahaas laga soo qaadey dad gaaraya 28 000 oo qof oo ku kala nool 28 dal oo kala duwan.
Dadkaa ayaa boqolkiiba 57 waxay wax wanaagsan u arkaan in dalalkoodu qeyb ka yihiin midowga Yurub taas oo macneheedu yahay in taageerada loo hayo midowga yurub ay dib ugu noqotey heerkii ay joogtey sanadkii 2007-dii, wax yar ka hor intii uusan dhicin dhibkii dhaqaale ee dunida oo dhan saameeyey.
Dadweynaha Sweden ayaa boqolkiiba 62 waxay isku celcelis ahaan aaminsan yihiin in wax fiican ay aheyd in dalkoodu uu xubin buuxda ka noqdo ururka midowga Yurub. Boqolkiiba 70 dadka reer Sweden ee weydiimahaas laga qaadey ayaa sheegey in ay ka qeyb qaadan doonaan codeynta doorasho ee baarlamaanka midowga Yurub oo 2019-ka dhici doona, tiraadaasina waxay aad uga badan tahay dadkii reer Sweden ee sanadkii 2014-kii ka qeyb qaatey doorashadii baarlamaanka midowga yurub ee dalkan ka dhacdey kuwaas oo dhammaa boqolkiiba afartan oo kaliya.
Dalalka ugu badan ee ay dadweynahoodu taageerada buuxda u hayaan midowga yurub ayaa kala ah Irland, Malta iyo dalka Letland kuwaas oo 10-kii qofba 9 ka mid ahi wax wanaagsan u arkaan in dalalkoodu ey xubno ka noqdeen midowga Yurub.
Dadweynaha dalka Talyaaniga ayaa noqdey kuwa ugu badan ee aan ku qanacsaneyn in dalkoodu xubin ka noqdey ururka midowga Yurub, boqolkiiba afartan oo kaliya ayaa dalkaas aaminsan in wax wanaagsan ay aheyd in dalkoodu xubin ka noqdo ururka midowga Yurub.
Tirakoobkaan cusub ee laga soo qaadey dadweynaha reer yurub ee dalalkoodu xubnaha ka yihiin ururka midowga Yurub ayaa muujiyey in dalalka hodonka ah ee dhaca qaaradda yurub woqooyigeedu ay badankoodu ku qanacsan yihiin ka mid ahaanshaha ey dalalkoodu ka midka yihiin midowga Yurub, in ka badan taageerada ay ururkaas u hayaan dadyowga ku nool dalalka fakhriga ah ee dhaca koonfurta qaaradda Yurub.
Midowga yurub ayaa taageerada ugu badan waxaa u haya dadka aqoontooda waxbarasho ey aad u sareyso, dhakhligooda dhaqaalana sareeyo isla markaana magaalooyinka ku nool.